Raw Estradiol Benzoate powder (50-50-0) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Madzimai eHormoni / Estradiol Benzoate upfu
Rating: SKU: 50-50-0. Category: Madzimai eHormoni
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika kuhuwandu hweEstradiol Benzoate powder (50-50-0), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwehutano.
Kurapa kushandiswa kwe-estradiol benzoate kwakafanana neyedziye estradiol nedzimwewo estrogen. Muenzaniso wekuratidzira kwechirwere ndeyehomoni inotsiva remapiritsi emamenopausal zviratidzo kana hypoestrogenism.
Molecular Kurema: 376.488
Raw Estolol Benzoate kushandiswa kwehushoni muSteroids
Estradiol benzoate (CAS 50-50-0) (EB, E2B) (INN) (zita rechiratidzo Progynon-B, mamwe akawanda), kana oestradiol benzoate (BAN), inogadzirwa, steroidal estrogen uye estrogen ester.
Mumwechete muyero we2.5 mg estradiol benzoate neiyo intramuscular jekiseni yakawanikwa ichiburitsa plasma estradiol mazinga e> 400 pg / mL, akayera 24 maawa post-jekiseni, muboka revarwere vane mashoma epasireji mazinga eestradiol.
Mimwe migumisiro ye-estradiol benzoate inofanana neyei-estradiol. Mienzaniso yemigumisiro yakadaro inosanganisira mazamu ekunyorova uye kuwedzera, kushungurudza, kubvisa, edema, musoro, uye melasma.
Esters ye-estradiol yakafanana ne-estradiol benzoate inoshandiswa hydrolyzed prodrugs ye-estradiol, asi ine nguva yakawedzerwa iyo inotungamirirwa mumafuta kuburikidza nejeri remakumbo nekuda kwechigadziro chinokonzerwa nemafuta avo e acid ester. Sezvakaita prodrugs ye estradiol, estradiol benzoate uye mamwe esradiol esters ndiwo estrogens.
Nzira yekutenga Estradiol Benzoate powder (CAS 50-50-0) kubva kuAASraw